IN LA DHISO MUSQULO WADDAN LEH GACMAHOODA - DHISMAYAASHA
Marka aad qabanqaabinayso dhulka banaankeeda, waxaad u baahan tahay inaad samayso, marka hore, qaybinta dhulkeeda marka loo baahdo, oo ubaahan dareenka ugu horreeya dhismaha. Kuwaas waxaa ka mid ah musqusha ama musqusha.
Iyadoo aan la joogin, joogitaanku wuxuu noqon doonaa mid aan haboonayn sida qol kale ama shay kale.
Dhismaha musqusha waa in la fuliyaa si waafaqsan shuruudaha nadaafada lagu sharaxay dukumintiyada sharciyeynta. Halkan waa in la tixgeliyaa qoto dheer ee dhulka biyaha, fogaanshaha ilaha biyaha la cabbo, dhismayaasha degaanka iyo waxyaabaha kale ee aan ku habooneyn musqusha iyo musqusha. Haddii aadan u hoggaansamin markaad musqusha ka dhisto, waad dhaawici kartaa adiga laftigeeda, laakiin sidoo kale deriska ku yaala dacha.
Tusaale ahaan, meesha ku dhow ceelka ama dhinaca dabaylaha ayaa markaa ka dib dhibaato weyn u keeni doonta.
Masaafada u dhexaysa ilaha biyaha, ceelasha iyo tiirarka waa inay ahaadaan 25 mitir. Haddii biyaha dhulka hoose uu qoto dheer yahay, waxaad musqusha ka dhigi kartaa musqul caadi ah.
Marka la eego xeerarkeeda nadaafadda, moolka waa in ay ahaataa ugu yaraan laba mitir, ballaadhkeeduna waa hal mitir.
Qoyska seddex ama afar qof, musqusha oo leh qaboojiye 2 x 1.4 x 1 mitir ayaa ku haboon. Haddii loo baahdo dad badan oo ku nool goobta, meeshiisu waxay kor u kacdaa saddex meelood hal meel.
Waxaan ku dhisi karnaa kuleyliyo polikarbonad leh gacmaheena.
Baro sida loo sameeyo aqalka dhirta lagu koriyo ee gacmahaaga. Http://rusfermer.net/postrojki/sadovye-postrojki/teplichnie-soorujeniya/parniki-etapy-stroitelstva-i-osobennost-vyrashhivaniya-v-nem.html.
Akhri halkan ku saabsan cinwaanka iyo sifooyinka faa'iidada leh.
Waa in maskaxda lagu hayaa in ay tahay in ay adkaan doonto in la nadiifiyo, iyo xakameynta tartiib-tartiibka ah ee dhuunta dhulka ayaa ka qaybqaata xaqiiqda ah in nadiifinta ay tahay in la sameeyo waqti ka badan.
Noocyada musqulaha dalka
Musqulaha dalka ma noqon karaan oo keliya muraayad. Haddii dhulka hoose uu sarreeyo, markaa, waxay u badan tahay, qoditaanku wuxuu noqon doonaa fikrad xun. Xasaasiyadda naafaynta waxay keeni kartaa nadaafad xumo, nadiifin adag, iyo ur xun.
Xaaladdan oo kale, kaydka biyaha laga dhigi karo waqti ka waqti ayaa ku haboon saxan ahaan kursiga musqusha. Musqusha taangiga dib u celinta ee bullaacadaha ma'aha mid aad u habboon, laakiin, kiis kasta, waxay damaanad qaadeysaa ilaalinta musqusha nadaafadda iyo nadaafadda.
Dhismaha musqusha, sida ay tahay, waxay ka timaaddaa diyaarinta qaboojiyaha, haddii tani ay ku jirto qulqulka qoto dheer ee kaydka biyaha.
Wajiga ceelka la kariyay waa inaanu ahayn mid caadi ah, laakiin sidoo kale waa mid raaxo u leh qof si uu ula shaqeeyo majaraha iyo baaldi, maadaama ay lagama maarmaan tahay in dhulka laga jiido oo la gooyo jarjar jajab ah.
Si aad u qodo dalool hal shaqaale, waxaad u baahan doontaa inaad wakhti badan iyo dadaal badan ku qaadato, si joogto ah kor iyo hoosba si aad u sii wadato qashin. Way fiicantahay haddii uu jiro kaaliye ama dad yar oo si dhakhso ah u faaruqi doona baaldiyada carrada, qodo oo mar labaad u adeega xadhigga.
Marka ceelka loo qodo qoto dheer, saldhigeedu waa rutudud oo lagu shubay qashin, dhumucda lakabka waa inay noqotaa qiyaastii afar sentimitir.
Xoogga lakabka, marka mugga godka uu yahay mid aad u ballaadhan, waxaad ku xoojin kartaa adigoo adeegsanaya mesh aalad joogto ah.
Darbiyada, oo ka billaabanaya dhulka hoostiisa, ayaa lagu dhajiyaa qaab habboon oo lebenyo ah, oo u dhexeeya boogaha yaryar ee ka soo baxa dabiiciga dabiiciga ah ee dhulka hoostiisa.
Haddii biyuhu hoos u dhacaan guga, markaa waxay ka fiicnaan lahayd in derbiyadu diyaar u noqoto, si ay u daboosho lebbiska maaddada sibidhka.
Lakabka ugu dambeeya ee lebenyada dusha sare waa inuu siiyaa furitaan loogu talagalay rakibidda xidhmooyinka xirmooyinka.
Baasaboor Bulgaariya, waxaa lagu beeray dacha.
Baro sida loo koro qaraha
Wax soosaarka dhulka ee musqusha dalka
Dhulka, kaas oo lagu rakibayo gadhka, ayaa ka samaysan yahay weelasha leh dhumucdiisuna qiyaastii 50 mm, width waxay noqon kartaa 120-130 mm. Boards ayaa horay loo daaweeyay antiseptic ka soo fangaska, kallana iyo cayayaanka iyo qalajiyey. Wixii kursi yar oo dhexda ka ah dabaqa, godka dhexroorka ilaa 400 mm ayaa la sameeyaa, ka dibna waxaa la qabadsiiyaa boorsada. Goobaha waxaa loo sameeyaa dabaqa si ay uxoodaan darbiyada qalabka.
Guriga musqusha wuxuu ku jiraa qaab sanduuq oo albaabkiisu yahay laba mitir. Qaab-dhismeedka waxaa la sameeyaa, barar isku mid ah oo isku xidhan. Albaab albaab leh albaabbada hinged ah ayaa lagu rakibay albaabka. Wixii adag ee dhismaha gudaha musqusha waxay ku jiidanayaan kerchief dheeraad ah. Cabbirka sanduuqa ayaa kuxiran hawlgalka.
Waa suurtogal in lagu rakibo musqusha oo keliya ma aha musqusha musqusha, laakiin sidoo kale waa la qaboojiyay nidaam qashin ah, waxay soo saaraan labadaba, iyada oo la adeegsanayo tuubooyinka caaga ah ee banaanka ka baxsan.
Saacad yar oo musqusha ah ayaa laga sameyn karaa wax kasta oo wax lagu dulmiyo, uma baahna qaab dhismeed adag. Waxaad dhisi kartaa saqaf sahlan oo isku mid ah oo rinjiga ku rinjirta isla guriga guri. Meelaha waxaa lagu sameeyaa jihada albaabka dambe ee xagasha ugu yaraan 30 digrii oo saldhig ah.
Ugu horreyntii, waxaad u baahan tahay inaad sameysid shaashad qaanso ah oo ka mid ah baararka leh khadadka dheeraadka ah. Saldhigga saqafka waxaa lagu daboolay walxaha insulating, sida saqafka dareemey. Qalabka qarxa waxaa lagu xannibayaa marinka la dhisay.
Albaabka musqusha waxaa lagu dabooli karaa walax kasta oo insulato ah. Sidaas darteed waa si fiican oo si adag u xiran yihiin, kuraasta waa in si fiican loo qalajiyey, laguula dhaqmo walax daawo ah iyo rinji.
Baro faa'iidooyinka dhirta jidhka bini'aadamka.
Halkan u akhri sida loo koro celceliska dukaanka //rusfermer.net/ogorod/listovye-ovoshhi/vyrashhivanie-i-uhod/selderej-trava-schastya-dlya-vseh-i-kazhuko.html.
Qalabka hawada ee musqusha dalka
Si aad uga takhalustid urta aan fiicnayn qolka musqusha, waxaad u baahan tahay inaad hore u sii fekerto habka hawada. Waxaa lagu samayn karaa qaab bacda balaastigga ah oo ka baxsan dusha sare ee duleelka. Tuubbadu waxay kuxirantahay derbiga waxaana lagu soo bandhigaa saqafka sare.